QALALAASE: Wax Badan Ka Ogow Xaaladaha Qalafsan Ee Ku Xeeran Xulka Qaranka Spain, Khilaafka Real Madrid Ka Dhex Abuurtay Madax Waynaha Xidhiidhka Kubbada Cagta Spain Ee Luis Rubiales & Julen Lopetegui Iyo Faah Faahin Cusub Oo Soo Baxday. – GOOL24.NET
QALALAASE: Wax Badan Ka Ogow Xaaladaha Qalafsan Ee Ku Xeeran Xulka Qaranka Spain, Khilaafka Real Madrid Ka Dhex Abuurtay Madax Waynaha Xidhiidhka Kubbada Cagta Spain Ee Luis Rubiales & Julen Lopetegui Iyo Faah Faahin Cusub Oo Soo Baxday.
Xulka qaranka Spain ayaa si lama filaan ah dhexda ugu galay xaalad xun oo qalalaase ah kadib markii 24 saacadood in ka yar ay soo baxeen dhawr go’aan oo lama filaan ku noqday jamaahiirta kubbada cagta. Ugu horayn shalay galabnimadii waxaa hal mar lagu war helay in maamulka kooxda Real Madrid uu booskii Zinedine Zidane u magacaabay Julen Lopetegui oo xulka qaranka Spain kula sugnaa dalka Russia.
Markii Real Madrid ay ku dhawaaqday heshiiska tababare Julen Lopetegui waxaa isla markiiba war saxaafadeed soo saaray xidhiidhka kubbada cagta Spain waxayna sheegeen in marka uu koobka aduunku dhamaado uu Julen Lopetegui bixi doono waxayna markaas doonayeen in Real Madrid ay bixiso 2 milyan euros oo ah lacagta heshiiskiisa lagu burburin karayo.
Laakiin 15 daqiiqo kadib waxay xidhiidhka kubbada cagta Spain markale soo saareen ogaysiis kale waxayna shaaciyeen in madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales iyo tababare Julen Lopetegui ay Russia ku wada qaban doonaan shir jaraa’id waxayna arintani saamaysay jadwalkii iyo tababarkii xulka qaranka Spain ee koobkaa duunka.
Laakiin si lama filaan ah waxa uu madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales uu go’aan ku gaadhay in aanu xulka qarankiisa ku sii haysan Julen Lopetegui oo waqti xaasaasi ah xul qarankiisa ku ixtiraami waayay kaas oo waqtigii ugu muhiimsanaa doortay in uu shaqada Real Madrid ogolaaday oo uu waliba raali ka noqday in heshiiskiisa lagu sii dhawaaqday 48 saacadood ka hor kulanka ay Portugal la ciyaarayaan.
Madax wayne Luis Rubiales ayaa cadhado wayn kala dul dhacay Julen Lopetegui wuxuuna iyada oo isla barri koobka aduunka la daah furi doono uu shaqadii ka xayuubiyay tababare Julen Lopetegui taas oo ka dhigan in xulka qaranka Spain uu galay xaalad waali ah oo aanu qofna markii hore filayn.
Khabiirka kubbada cagta Spain iyo Sky Sports ee Guillem Balague‏ ayaa sheegay in go’aanka madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales uu yahay mid uu ku muujinayo in kooxaha waa wayn ee Real Madrid iyo Barcelona ama cid kastaa ayna xidhiidhkiisa u arag mid liita ama hooseeya wuxuuna Luis Rubiales sheegay in go’aankani uu ka dhigi doono mid xoogan.
Luis Rubiales ayaa yidhi: ” Waqtigan waxa uu go’aankani inaga dhigi doonaa kuwo xoogan. Ciyaartoydu wax walba oo ay awoodaan ayay samayn doonaan si ay kooxda qaranka ugu qaadaan halka ugu fog ee ay awoodaan, laakiin ma doonayno in aanu ku lug yeelano doodooda gudaha (ee ciyaartoyda Real Madrid)” Iyada oo Sergio Ramos uu markiiba difaacay in Lopetegui uu sii joogo.
Waxay hadda si cad ugu muuqataa in dhibaatadii uu Zinedine Zidane dhex dhigay maamulka Real Madrid ay iyaguna u dhoofiyeen xurunta xulka qaranka Spain iyada oo ku dhawaaqistii Julen Lopetegui ee Los Blancos ay mowjado qalalaase ah ka dhex abuurtay xidhiidhka kubbada cagta Spain iyo Julen Lopetegui.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo 48 saacadood ka hadhan tahay xiliga ay Spain koobka aduunka ku furan doonto kulanka Portugal, waxaa shaqadiisii waayay Julen Lopetegui kaas oo haddaba ku qasbaan doona in uu Bernabeu u dhaqaaqo si uu xaalada Los Blancos u sii bilawdo.
Laakiin madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales oo dhawaan la soo doortay ayaa kaga dhabeeyay qodobadii uu ku galay ololihii doorashada wuxuuna balan ku qaaday in xidhiidhka kubbada cagta Spain uu ka dhigi doono mid nadiif ah, waxaana lagu taageeray go’aanka uu qaatay.
Madax waynaha FA-ga Spain ee Luis Rubiales ayaa si wayn uga cadhooday hab dhaqanka tababare Julen Lopetegui, wuxuuna si cad u sheegay in heshiiska uu Real Madrid la gaadhay uu sameeyay isaga oo aan iyaga ku soo war galin, wuxuuna si layaab leh u sheegay in 5 daqiiqo oo kaliya ka hor markii heshiiskiisa lagu dhawaaqayay ay ogaadeen.
Luis Rubiales oo ka hadlaya qaladka uu sameeyay Julen Lopetegui ayaa yidhi: ” Waxaanu ogaanay in uu Real Madrid u baxayo markii ay shan daqiiqo oo kaliya ka hadhsanayd in lagu dhawaaqo, waxaa jirta hab ay tahay in aad u dhaqanto. Julen si fiican ayuu kooxda ula shaqeeyaa, laakiin ma aqbali karno sida uu xaaladan ula dhaqmay”.
Laakiin madax wayne Luis Rubiales iyo ciyaartoyda xulka qarankiisa Spain ayaa hadda si toos ah u wada xidhiidh doona iyada oo waqtiyada soo socda la ogaan doono qaabka Spain ay isku maamuli doonto koobka aduunka ee barri oo khamiis ah furmi doona.